မြတ်သာသနာ ဓမ္မစာမျက်နှာ: ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသော သံဝေဂ အလုပ်ပေးတရားတော်
ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသော သံဝေဂ အလုပ်ပေးတရားတော်
'' ပိုင်းလော့ဆရာတော်၏ သံဝေဂ အလုပ်ပေးတရားတော် ''
အားလုံး သက်သာသလို ပြောင်းထိုင်နော် ။ ဒီည တိုက်ရိုက် အလုပ် လုပ်ကြရအောင် ။
ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဟောကြားတော်မူတဲ့ . . .သုတံ္တနဲ့ သတိပဌာန်မှာပါတဲ့ အသုဘ လူသေ ၉ မျိုး အဆင့်ဆင့် ရှုပွားပုံ ၊ ဝိဇယသုတံ္တမှာ ပါတဲ့ ရှုမှတ်ပွားများပုံ ၊ နောက် အသီးသီး အခြားခြား ၊ သုတံ္တတွေမှာလည်း ဟောတဲ့ ရှုပွားပုံတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး တော့ကာ ဘုန်းဘုန်းတို့ သင်ကြရမယ် ။ ပွားများကြရအောင်နော် ။ ကဲ သက်သာသလို ထိုင်ပြီးတော့ကာ မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့ အာရုံယူကြ ရအောင် ။
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဟောတော်မူတဲ့ သံဝေဂလေး ဆိုရအောင် . . . .
'' ငါသည် မုချသေရမည် အချိန်းပိုင်းသာ လိုတော့သည် အသေမဦးခင် ဉာဏ်ဦးအောင် ကြိုးစားအားထုတ် ပါတော့မည်။ ''
မျက်စိမှိတ်ပြီး အာရုံပြုကြနော် . . .ဘုရားရှင် အမိန့်ရှိတော်မူတာက အခု အချိန်မှာ သေချိန်လို့ စိတ်ကို ချထားရမှာ . .နေရာတိုင်း ၊ နေရာတိုင်း ဤကမ္ဘာအတွင်းမှာပင် . . မသေဘူးတဲ့ နေရာမရှိပါဘူးတဲ့ ။
ခြေချတဲ့ နေရာတိုင်း ၊ နေရာတိုင်းဟာ . . သတ္တဝါမျိုးစုံ ၊ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ သေခဲ့တဲ့သင်္ချိုင်းမြေ ၊ နေရာဟောင်းလို့ ပွားရပါတယ်တဲ့ ။ အခုထိုင်နေတဲ့ နေရာသည် ဤကမ္ဘာ အတွင်းမှာပင်အကြိမ်များစွာ ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ သေခ့ဘဲူးတဲ့ နေရာဟောင်းပါလို့ ၊ ဆင်ခြင်ကြရမယ် ။ ငါ့အိမ် ၊ ငါ့ယာမဟုတ်ဘူးလို့ မယူပါနဲ့ .
ခေါင်းချခဲ့ဘူးတဲ့ ၊ နောက်ဆုံးသေခဲ့ဘူးတဲ့ နေရာဟောင်း . . .ဒီနေရာမှာ . . အလောင်းချင်းထပ်အောင် သေခဲ့ ၊ မြုတ်ခဲ့ဖူးပြီလို့ ဆင်ခြင်ရမယ် ။
ဘဝတစ်ခုမှာ ရှင်ဘုရင်တစ်ပါး နတ်ရွာစံတော့ မိဖုရားဟာ ဥယျာဉ်ထဲမှာ အလောင်းကိုဂူသွင်းပြီးတော့ ငိုတာ ၊ ဘယ်သူမှ တားမရဘူး ၊ နေ့စဉ်လို ငိုပြီးတော့နေတာ ။ တစ်နေ့ ဘုရားအလောင်းရသေ့ ဥယျာဉ်ထဲထွက်လာတဲ့အခါမှာ . . . သူ့ရဲ့ သောကကိုဖျောက်ခဲ့ဘူးတယ်တဲ့ ။
အသင် မိဖုရား ဘာအတွက် ငိုပါသလဲ . . . .၊
'' တပည့်တော်ရဲ့ ခင်ပွန်းသည် ဘုရင်မင်းအတွက် ငိုပါသည် ဘုရား '' လို့ ဖြေတယ် ။
'' သင့်ရဲ့ ခင်ပွန်းသည် ၊ ဘယ်ခင်ပွန်းသည် အတွက် ငိုတာတုံး '' လို့ ထပ်မေးတော့ ။
'' မေးထားတာ ဖြေရခက်နေတယ် ''
ဒီတော့မှ ဘုရားအလောင်းရသေ့ကြီးက ထပ်ပြောတယ် . . .
'' ဒီနေရာမှာ သင့်ရဲ့ ခင်ပွန်းသည်ပေါင်း များစွာ မြှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ နေရာတဲ့ ''
အဲ့ဒီအတွက် . . ဘယ်ခင်ပွန်းသည်အတွက် . . ငိုတာလဲ . . .၊ လို့ မေးတဲ့အခါမှာ မိဖုရားက စဉ်းစားရခက်တယ် ။ ဖြေရခက်နေတယ် ။ အဲဒီတော့မှ ရှင်းပြတယ် . . . .
ဤကမ္ဘာ အတွင်းမှာပင် ကိုယ့်ရဲ့ ခင်ပွန်းသည် ယောက်ျားဟာ တော်ခဲ့ပေါင်းများပြီတဲ့ ၊
သေခဲ့ပေါင်းလည်း များပြီတဲ့ ၊ ဒီတစ်နေရာတည်းမှာဘဲ မြှုပ်ခဲ့ပေါင်းလည်း များပါပြီတဲ့ ၊
အကြိမ်ကြိမ်ငိုခ့ရဲ တဲ့ မျက်ရည်ဟာလည်းဘဲ မနည်းတော့ပါဘူးလို့ ဆုံးမတော်မူတယ် ။
ဒါကြောင့် ဒီကျမ်းတွေကို ကိုးကားလျှက် ၊ ကိုယ်ထိုင်တဲ့ နေရာလေးသည်ပင်
အကြိမ်များစွာ၊ အလောင်းချင်းထပ်အောင် မြှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ နေရာဟောင်းလို့ ဆင်ခြင်ကြပါ ။
ဤကိုယ်ကြီးသည် '' ပညတ် '' အားဖြင့် '' ငါ '' လို့ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တဲ့ ကိုယ်လုံး
တကယ့် အနှစ်သာရ အမာခံကို ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင် . . . .
အရိုးစုတွေပဲ ရှိပါတယ် ။ ခေါင်းမှာဆိုရင် '' ခေါင်းခွံရိုးကြီးပဲ ရှိပါတယ် '' ။ နောက်
လည်ပင်ရိုး ထောက်ကန်ထားတယ် ။ နောက် ညှပ်ရိုး ၊ ပုခုံးရိုးတွေ ဆက်သွယ်ထားတယ် ။
ညာဘက်မှာက လက်မောင်း ရိုးတစ်ချောင်း ၊ တတောင်ဆစ်ကနေ လက်ဖျံရိုး နှစ်ချောင်း ၊
လက်ဖဝါးမှာလည်း အရိုး ၊ အဆစ် စပ်ထား တာ ။ ဘယ်ဘက်မှာလည်းဘဲ လက်မောင်းရိုးကတစ်ချောင်း ၊ တတောင်ဆစ်ကနေ လက်ဖျံရိုး နှစ်ချောင်း ၊ နောက် လက်ဆစ်ရိုးလေးတွေ အတိုအထွာ အပိုင်းအစလေးတွေ ဆက်စပ်ထားတာ ခေါင်း ၊ ခါး ၊ ခြေ ၊ လက် နောက် လည်ဂုတ်နားကနေ
ဆက်ပြီးတော့ကာ ၊ အရိုးအဆစ်တွေ ဆင့်ဆင့်ပြီးတော့ စီးသွားလိုက်တာ ဟိုးအောက် မီးဆုံအထိ
ဘေးမှာ နံရိုးတွေ ထောက်ကန် ၊ ရှေ့က ရင်ညွန့်ကြီးနဲ့ဆက် ၊ ရှေ့မှာ ဝမ်းခေါင်းကြီးဖြစ်သွားပါတယ် ။ ပြီးရင် ဝမ်းဗိုက်နေရာကျတော့ ဟောင်းလောင်းကြီးပါပဲ ၊ အောက်ဖက်မှာ
တင်ပါးဆုံရိုး ခံစားကြည့်သိပါတယ် ။ လေးလံတဲ့ အရိုးကြီးက အထဲမှာရှိတော့ အောက်မှာလည်း
ကြမ်းပြင်က အမာ ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ အသားတွေက ဘယ်ခံနိုင်မှာလဲ ၊ ကြာကြာဖိထားရင်
သွေးလေတွေ ပိတ်လို့ ထုံဟာ ကျင်ဟာ ဖြစ်လာတာပေါ့ ။
နာလည်း နာတက်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လို့ နားလည်ထားရမှာ ၊ တင်ပါးဆုံရိုးရဲ့
တဖက်တချက်စီမှာ ပေါင်ရိုးတစ်ချောင်းစီ ဆက်သွယ်ထားတာ ၊ ညာဘက်ပေါင်ရိုးတစ်ချောင်း ၊
နောက်ပြီးတော့ ဒူးခေါင်းရိုး ၊ ခြေသလုံးရိုးက နှစ်ချောင်း ၊ နောက် ဖနောင့်ရိုးတွေ ၊ ခြေဖဝါးတွေက
အပိုင်းအပြတ်ပြတ် အဆစ်ကလေးတွေ ဆက်ထားတာ ၊ နောက် ဘယ်ဘက်မှာလည်း
ပေါင်ရိုးတစ်ချောင်း ၊ နောက် ဒူးခေါင်းရိုး ၊ ခြေသလုံးရိုးက နှစ်ချောင်း ၊ ဖနောင့်ရိုးကလေးတွေ
ခြေဖဝါးရိုးကလေးတွေကလည်း အပိုင်းအပြတ်ကလေး ဆက်ကာထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဤကိုယ်ကြီးသည် အရိုးစုများနဲ့ စိုက်ထောင်ထားတဲ့ ခန္ဓာအိမ် ဖြစ်ပါတယ် ။
ဤခန္ဓာအိမ်ပေါ်မှာမှ အင်္ဂတေ ကျံသကဲ့သို့ အသားများ တွယ်ကပ်ပြီးတော့ နေတာ
လိမ်းကျန်ထားသကဲ့သို့ ဘဲတဲ့ ၊ ပြီးတော့ အကြောတွေဖွဲ့လို့ ချည်ပတ်ထားတာ ၊ ပြီးတော့ အရေထူ ၊
အရေပါး ဖုံးထားတာကြောင့် အထဲမှာရှိတဲ့ သဘောအမှန်ကို '' မျက်စိနဲ့မမြင်ကြရတာ '' ဖြစ်ပါတယ်
ခေါင်းခံရိုးထဲမှာက ညှီစို့စို့ အနံ့နဲ့ ဦးနှောက်တွေ ရှိနေပါတယ် ။ နောက်ပြီးတော့ ဝမ်းထဲမှာ ကတော့ ပါးစပ်ကနေ စအိုဝတိုင်အောင် ၊ ဒါကတော့ ဘုန်းကြီးတို့ စကားကျစ်လိုက်တာပါဘဲ။ အူသိမ် ၊ အူမ ၊ အသည်း အဖျင်း စသဖြင့် အမဲအူတွေလို ၊ ဆိတ်ကလီစာ အူတွဲတွေလို ကြက်အူတွဲတွေလို ပါဘဲ ရှိနေပါတယ် ။ အရိအရွဲတွေ ပြည့်လို့ ရွံစရာ ဖြစ်နေပါတယ် ။ဝမ်းထဲမှာ ရှိနေကြပါတယ် ။ ပါးစပ်ကနေ ဝါးမြိုလိုက်တဲ့ အစာသစ်များသည် အချွဲ ၊အာစေးတွေနဲ့ ရောထေွး လို့ ခွေးအန်ဖတ် အလား ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကို တံတွေး ၊ သလိပ်တွေနဲ့ ရောထွေးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ မျိုချလိုက်ကြတာ . . . အစာအိမ်ထဲမှာ အစာသစ်တွေက ခွေးအန်ဖတ်အဖြစ်တည်နေပါပြီ ၊ ရှိနေပါတယ် ။ အပေါ်ကနေ အချိုရေတွေ ၊ လ္ဘက်ရည်တွေ ၊ ရေ ၊ ရေနွေးကြမ်း စသည်ဖြင့် ဒါတွေကို လောင်းထည့်ပြီးတော့ကာ မွှေနှောက်တော့ကာ တကယ့်ကို ရွံစရာကောင်းတဲ့ ခွေးအန်ဖတ်နဲ့ တူပါတယ် ။ အရောင်မျိုးစုံ ၊ ပုံသဏ္ဍာန် မျိုးစုံနဲ့ ရံစွ ရာ ကောင်းအောင် ရှိနေပါတယ် ။ အူနံရံက လှုပ်ရှားရိုက်ခတ် တွန်းပို့တာကြောင့် အောက်ဖက်အူမ ၊ အူသိမ်ထဲ ဆင်းသွားပါတယ် ။ အူနံရံ ၊ အစာအိမ်နံရံတွေကလည်း ရေငွေ့တွေကို စုပ်စုပ်ပြီးတော့ကာ လိုအပ်သည်များကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ ပို့နေတာ လိုအပ်တဲ့နေရာကို ပို့နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြောက်သွေ့ ခြောက်သြေွ့ပီးတော့ကာ ကျစ်ကျစ်လာတာ ၊ အောက်ပိုင်းကျတော့ အစာဟောင်းဆိုတာ ၊မစင်ကျင်ကြီး ဖြစ်သွားတာပါဘဲ ၊ အပုတ်နံ့ လှိုင်နေပါတယ် .. လို့ မှတ်ကြပါ ။ အရည်များကတော့ကျင်ငယ်အိမ်မှာ သွားစုပြီးတော့ကာ ရွံစရာအနံ့နဲ့ ကျင်ငယ်ဖြစ်နေပါပြီ ဤဝမ်းထဲမှာ ကျင်ငယ်တွေ ၊ကျင်ကြီးတွေသည် ရှိနေပါတယ်တဲ့ . . .။
ဝမ်းဗိုက်ထဲကို ရောက်နေတဲ့ အစာသစ်ကတော့ ခွေးအန်ဖတ်လို ဖြစ်ပြီး ၊ အစာဟောင်း
ကတော့ ကျင်ကြီးအသွင် ၊ ကျင်ငယ်အသွင်နဲ့ ရှိနေတဲ့ အတွက် ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ပြည့်နေတဲ့
မစင်ထည့် ထားသော အိုးနဲ့ လည်း တူပါတယ် ။တနည်းအားဖြင့် မြွေသေကောင်ပုတ်ကြီးကို ထည့်ထားတဲ့အိုးနဲ့လည်း တူပါတယ်တဲ့။ ခွေးသေကောင်ထည့်ထားတဲ့ အိုးနဲ့လည်း
တူပါတယ် လို့ ပြပါတယ် ။ ရွံစရာ အတိပါဘဲတဲ့ ၊ အပုတ်နံ့များသည် ဒီအတိုင်း မနေပါဘူးတဲ့ ၊
ထက်ဝန်းကျင်ကို စိမ့်ပျံ့ပြီးတော့ ထွက်နေပါတယ် ။
မျက်လုံးအိမ်ကနေ စိမ့်ပျံ့တဲ့အါ မျက်ချေးအသွင် စိမ့်ထွက်ပါတယ် ။ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ တစိုစို
ထွက်နေပါတယ် ။ နားကနေ စိမ့်ထွက်တဲ့ အခါကျတော့ နဖါချေးအသွင် စိမ့်ထွက်ပါတယ် ။
နှာခေါင်းအရိုး စုလေး ကနေ ထွက်တော့လည်းဘဲ နှပ်အသွင် စိမ့်ထွက်ပါတယ် ။ ပါးစပ်ကလည်း
သွားချေးရည်တွေ စိမ့်ထွက်ပါတယ် ။တစ်ခါတရံ လေလမ်းကြောင်းပြောင်းလို့ နှာခေါင်းကထွက်မဲ့
နှပ်ကလည်း သလိပ်အသွင် ပါးစပ် ကနေထွက်တဲ့အခါ ထွက်ပါသေးတယ် ။ ကျန်တဲ့
မွေးညှင်းပေါက်တေကွ လည်းပဲ ချွေးနဲ့အတူ အပုပ်အခိုး တွေဟာ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ တရှိန်းရှိန်းနဲ့
ထွက်နေပါတယ် ။ တရှိန်းရှိန်းနဲ့ ခံစားကြည့်ကြပါ။ အခိုး ၊ အငွေ့ ကောင်းတယ် ၊ ကောင်းတယ်
ဆိုတာက အပုပ်အခိုး ၊ အပုပ်အငွေ့ တွေပါဘဲလို့ ဆင်ခြင်ကြပါ ။ ကျန်တဲ့ ဒွါရကြီးတွေကလည်းဘဲ
ကျင်ကြီး ၊ ကျင်ငယ် အပုပ်ခဲ ၊ အပုပ်ရည်အဖြစ်နဲ့ နေ့စဉ်လို ယိုစီးထွက် နေပါတယ် တဲ့ ။
ဤကိုယ်ကြီးသည် နာလည်း နာတတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကိုးပေါက်သောအနာဝရှိသော ပြည်တည်နေတဲ့ အိုင်းအနာကြီးနဲ့ တူပါတယ်လို့လည်း ၊ ဘုရားရှင် မိန့်တော်မူပါတယ် ။
ဤကိုယ်ကြီးကို '' အမြင်မရှိတဲ့ အမှန်အတိုင်းလည်း မမြင်ကြတဲ့ အမှောင်ဓါတ် ၊
အမိုက်ဓါတ် စိတ်မှာ ဖုံးကွယ်ထားကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ တင့်တယ်လှပတယ်လို့ ထင်ကြတယ် ၊
တစ်ငါငါ နဲ့ မာနတက်နေကြတယ် ''
ဤကိုယ်ကြီးကို အမှန်အတိုင်း မမြင်တာကြောင့် ငါက ဘာရာထူး ၊ ငါက ဘာမျိုး ၊ငါလှတယ် ၊ ငါအားရှိတယ် စသဖြင့် မာနတွေတက်ပြီး နေကြတာတဲ့ ၊
'' ဤမာနတရားများဟာ မဂ်ဉာဏ် ၊ ဖိုလ်ဉာဏ် နဲ့ ဝေးသထက်ဝေး အပါယ်လေးပါးသွားမယ့် မာနလို့ မှတ်ကြပါ ။ ''
အခြား ၊ အခြား ကျမ်းများနဲ့ ပြန်ပေါင်းရင်တော့ ၊ ဘယ်လောက်ပဲ တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့
အိမ်ကြီးတွေန့ပဲဒီကိုယ်ကြီးကိုထားထား ၊ ကုတင် ၊ ခြင်ထောင် ၊ မွေ့ယာတွေ သိန်းပေါင်းများစွာ
တန်တာနဲ့ ထားလည်းပဲ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ မတင့်မတယ် ရွံဖွယ်ရာကိုပဲ စိမ့်ထွက်နေပါလိမ့်မယ် ၊
တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ သိန်းပေါင်း များစွာတန်တဲ့ ရတနာတွေကို လည်ပင်းမှာဆွဲ ၊ နားမှာဖေါက်စွပ်ပေးပေး၊ လက်မှာလည်း စွပ်ကြ ၊ ခြေထောက် မှာလည်း စွပ်ကြနဲ့ ဘယ်လိုပဲ တန်ဆာဆင်ပေးစေတော့
'' ဤကိုယ်ကြီးကတော့ ရွှေပြန်မထွက်ပါဘူး ၊ မတင့်မတယ် ရွံဖွယ်ရာတွေပဲစိမ့်ထွက်နေပါလိမ့်မယ် ။ ''
သိန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ ကားတွေနဲ့ ထားလည်းဘဲ ၊ ကားပေါ်မှာ ချွေးတွေ ပျံလို့
တစိမ့်စိမ့်နဲ့ မတင့်မတယ် ရွံဖွယ်ရာတွေကိုပဲ စိမ့်ထွက်ပါလိမ့်မယ် ။
အဝတ်အထည်တွေ ဘယ်လောက်တန်ဖိုးကြီးတာတွေ ဝတ်ထားထား အနာတုံးကြီးကို
ပတ်တီးပတ်ထားသလိုပါဘဲနော် . . . ။ တစိမ့်စိမ့်ထွက်တဲ့ အပုတ်အခိုးတွေကြောင့် အဝတ်အထည်
သာလျှင် ညစ်နွမ်းခြင်းရောက်ရတယ် ။ စင်စစ်ကတော့ အဝတ်အထည်ထက်ပို၍ ညစ်နွမ်းတဲ့
ရွံစရာကောင်း သော '' မတင့်မတယ် ရံစွ ရာဖြစ်သော ခန္ဓာအိမ် '' လို့ မှတ်ကြပါ ။
တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ ရေမွှေး ပေါင်ဒါနံ့တွေ ၊ ဘယ်လိုပဲ လိမ်းချယ် လိမ်းချယ်
မွှေးညှင်းပေါက် ကနေ စိမ့်ထွက်ကြတဲ့ ချွေးနဲ့အတူ အပုပ်အခိုးတွေရဲ့ အရှိန်အဟုန်ကြောင့်
တကိုယ်လုံး အမွှေးနံသာတွေက ပျက်ပြယ်ကြရတာ ၊ တကယ်တော့ မတင့်မတယ်ရွံဖွယ်ရာသာ
စိမ့်ထွက်တဲ့ ခန္ဓာအိမ်ပါပဲလို့ မှတ်ကြပါ ။
အင်မတန် ညိုမဲပြီးတော့ကာ ၊ ပိတုန်းရောင် တောက်တဲ့ ဆံပင်တွေဟာလည်း တစ်စ
တစ်စရင့်ရော် အိုမင်းလာတဲ့ အခါကျတော့ '' ဖြူဖွေး '' လို့ ကြည့်မကောင်းတော့ပါဘူး ။
အမ္ဗပါလီ ရဟန္တာမကြီး ဥဒါန်းထဲမှာ ပါပါတယ် ။ ပြောင်းပင် ပြောင်းဖူးက ဖြူဖွေးတဲ့
အမွှေး များလိုပါဘဲတဲ့ ၊ ဟိုတုန်းက အင်မတန်လှပပြီး မဲပြောင်နေတဲ့ ဆံပင်ဟာလည်း အခုတော့
ဖြူဖွေးကုန်ပြီတဲ့ ၊ မလှတော့ဘူး ၊ တောက်ပပြီး လှပတယ်ဆိုတဲ့ မျက်လုံးကလည်း အခုတော့
မျက်ချေး တပေပေနဲ့ မျက်ခံက အိကျလို့ ရွံစရာကောင်းနေပြီတဲ့ ၊ တင်းဖေါင်းပြီးလှပတဲ့
ပါးပြင်တွေကလည်း အိတွဲလို့ ကြည့်မကောင်းတော့ဘူး ၊ ဖြူဖွေးစီတန်းပြီး လှပတဲ့ သွားတွေကလည်းပဲ
. . . ခယိုခယိုင်နဲ့ ကြည့်၍မကောင်းတော့ပါဘူး ။
ရုပ်ပျက်ကုန်ပါပြီတဲ့ ၊ လက်မောင်းကလေးတွေ ၊ ပေါင်တံကလေးတွေကလည်းပဲ
ဆင်နှာမောင်းလို သဖွယ်ပြောင်းတယ်လို့ ဆိုသော်လည်းပဲ ၊ အခုအချိန်မှာတော့ခြောက်သွေ့ တဲ့
ကြံချောင်းကြီး အဆစ်များနဲ့ တကွ ကြံချောင်းလိုဖြစ်သွားပြီ ၊ ခြောက်သွေ့တဲ့ ကြံချောင်းလို ဖြစ်ကုန်ပြီ
တင့်တယ်လှပတယ်ဆိုတဲ့ ရင်သားနှစ်မွှာကလည်းပဲ သုံးမရလို့ ပစ်ထားတဲ့ရေစစ်ပမာလို ရှုံ့ တွလို့ ကြည့်မကောင်းတော့ပါဘူး ။ ခါးတွေကလည်း ကိုင်းလို့ ယိမ်းယိုင်လို့မလှတော့ပါဘူး ၊ ကြည့်မကောင်း တော့ပါဘူး ။ အိုမင်းခြင်းရဲ့ ဒုက္ခ . . .
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နာရလိမ့်ဦးမယ် ၊ ရောဂါဘယတွေကြောင့်လည်းဘဲ ငြီးတွားနေရအုန်းမယ် ၊ အိပ်လို့လည်းမရ စားလို့လည်းမကောင်းနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ . . .ရောဂါဘယတွေနဲ့ ကိုယ့်ကျင်ငယ် ၊ ကိုယ့်ကျင်ကြီးကိုယ်မနိုင်လို့ သူများထူမှ ထရတဲ့ ဘဝဖြစ်ရလိမ့်အုန်းမယ် ၊ စုတေမနေသေကာနီး အခါမှာကျတော့ အသက်ကို ဆောင်လောက်အောင်ဓါတ်လေးပါး ဖေါက်ပြန်လို့ နာကျင်ပြီးတော့မှ နောက်ဆုံးသေရမှာ ။
သေပြီးလို့ တစ်ရက် ၊ နှစ်ရက် ၊ သုံးရက်ဆိုရင်ပဲ ဝါဝင်းတောင့်တင်းရာကနေပြီးတော့ကာ ၊ လေထိုးထားတဲ့ သားရေအိတ်ကြီးပမာလိုတဲ့ ညိုဖေါင်းကာပြီးတော့ကာ ၊အက်ကွဲကုန်ပြီတဲ့ ၊ သေွး တွေ ပြည်တွေ ဖြစ်လာပြီ ၊ ပိုးလောက်တွေစားကုန်ကြပြီ ၊ လှပပါတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ ပါးပြင်တွေမှာလည်းဘဲ အက်ကွဲလို့ သွေးတွေ ၊ သွေးပုပ်တွေ ၊ ပြည်တွေနဲ့ ရွံစရာအတိဖြစ်ပြီ ၊မျက်လုံးများလည်း ပြူးအန်ထွက်လို့ မလှတော့ပါဘူး ၊ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ တကိုယ်လုံးပိုးလောက်တွေလည်း စားကုန်ကြပါပြီ ။ လက်မောင်း လက်ဖျံတွေလည်း အက်ကွဲလို့ သွေးတွေပြည်တွေနဲ့ ဒွါရပေါက်တွေကလည်း တစိုစိုနဲ့ ပိုးလောက်တွေစားလို့ ရွံစရာ ဖြစ်ပါပြီ ။
သိန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ ကားတွေနဲ့ ထားလည်းဘဲ ၊ ကားပေါ်မှာ ချွေးတွေ ပျံလို့တစိမ့်စိမ့်နဲ့ မတင့်မတယ် ရွံဖွယ်ရာတွေကိုပဲ စိမ့်ထွက်ပါလိမ့်မယ် ။
အင်မတန် ညိုမဲပြီးတော့ကာ ၊ ပိတုန်းရောင် တောက်တဲ့ ဆံပင်တွေဟာလည်း တစ်စ
အမွှေး များလိုပတဲ့၊ ဟိုတုန်းက အင်မတန်လှပပြီး မဲပြောင်နေတဲ့ ဆံပင်ဟာလည်း အခုတော့
မျက်ချေး တပေပေနဲ့ မျက်ခံကွ အိကျလို့ ရွံစရာကောင်းနေပြီတဲ့ ၊ တင်းဖေါင်းပြီးလှပတဲ့
ဆင်နှာမောင်းလို သွယ်ပြောင်းတယ်လို့ ဆိုသော်လည်းပဲ ၊ အခုအချိန်မှာတော့ခြောက်သွေ့ တဲ့
တင့်တယ်လှပတယ်ဆိုတဲ့ ရင်သားနှစ်မွှာကလည်းပဲ သုံးမရလို့ ပစ်ထားတဲ့
ရေစစ်ပမာလို ရှုံတွလို့ ကြည့်မကောင်းတော့ပါဘူး ။ ခါးတွေကလည်း ကိုင်းလို့ ယိမ်းယိုင်လို့
မလှတော့ပါဘူး ၊ ကြည့်မကောင်း တော့ပါဘူး ။
အိုမင်းခြင်းရဲ့ ဒုက္ခ . . . တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နာရလိမ့်ဦးမယ် ၊ ရောဂါဘယတွေကြောင့်
လည်းဘဲ ငြီးတွားနေရအုန်းမယ် ၊ အိပ်လို့လည်းမရ စားလို့လည်းမကောင်းနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ . . .
ရောဂါဘယတေနွ့ဲ ကိုယ့်ကျင်ငယ် ၊ ကိုယ့်ကျင်ကြီးကိုယ်မနိုင်လို့ သူများထူမှ ထရတဲ့
ဘဝဖြစ်ရလိမ့်အုန်းမယ် ၊ စုတေ မနေ သေကာနီးအခါမှာကျတော့ အသက်ကို ဆောင်လောက်အောင်
ဓါတ်လေးပါး ဖေါက်ပြန်လို့ နာကျင်ပြီးတော့မှ နောက်ဆုံးသေရမှာ ။
သေပြီးလို့ တစ်ရက် ၊ နှစ်ရက် ၊ သုံးရက်ဆိုရင်ပဲ ဝါဝင်းတောင့်တင်းရာက
နေပြီးတော့ကာ ၊ လေထိုးထားတဲ့ သားရေအိတ်ကြီးပမာလိုတဲ့ ညိုဖေါင်းကာပြီးတော့ကာ ၊
အက်ကွဲကုန်ပြီတဲ့ ၊ သေွး တွေ ပြည်တွေ ဖြစ်လာပြီ ၊ ပိုးလောက်တွေစားကုန်ကြပြီ ၊ လှပပါတယ်လို့
ထင်ခဲ့တဲ့ ပါးပြင်တွေမှာလည်းဘဲ အက်ကွဲလို့ သွေးတွေ ၊ သွေးပုပ်တွေ ၊ ပြည်တွေနဲ့ ရွံစရာအတိဖြစ်ပြီ ၊
မျက်လုံးများလည်း ပြူးအန်ထွက်လို့ မလှတော့ပါဘူး ၊ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ တကိုယ်လုံး
ပိုးလောက်တေလွ ည်း စားကုန်ကြပါပြီ ။ လက်မောင်း လက်ဖျံတွေလည်း အက်ကဲလွို့ သွေးတွေ
ပြည်တွေနဲ့ ဒွါရပေါက်တွေကလည်း တစိုစိုနဲ့ ပိုးလောက်တွေစားလို့ ရွံစရာ ဖြစ်ပါပြီ ။
ချမ်းသာလည်းမျိုးစုံ စုံခြဲ့ကပါပြီ ၊ ဆင်းရဲလည်း မျိုးစုံခဲ့ပါပြီ ၊ ပင်ပန်းလှပါပြီ ။
ဘဒ္ဒဝတီ ညီနောင် သုံးဆယ်ကို သံဝေဂ ကထာဟောပုံကျတော့ ပို၍ နက်နဲလှပါတယ်
။ အင်မတန်ရှည်ကြာတဲ့ သံသရာလမ်းကလည်းပဲ သင်္ချေပေါင်း အနန္တလို့ ဆိုထားတော့ မရေနိုင်တဲ့
ကမ္ဘာတွေက အများကြီးပါဘဲ ။ ထိုထိုဘဝတွေ ဘဝတွေမှာ ခုလိုဘဲ အစုန်အဆန် ကျင်လည်လို့
ဖွါးလိုက် သေလိုက် ၊ ဖွါးလိုက် သေလိုက် လာခဲ့ကြတဲ့ သက်တမ်းတွေ တွက်ပြီး ဘုရားရှင်က
'' ချစ်သားတို့ နှစ်သက်သလို ဖြေကြတဲ့ . . . . . ။ ''
အင်မတန် ရှည်ကြာတဲ့ သံသရာကြီးမှာ ၊ ဘဝတွေ မရေနိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့တော့ ထိုထို
ဘဝ တွေထဲမှာ နွားဘဝ တစ်ခုတည်း နှလုံးသွင်းကြည့်ကြပါတဲ့ ၊
နွားတောင်မှ အဖြူ တစ်ခုတည်း ၊ စဉ်းစားကြည့်ပါအုံး . . .တဲ့ နွားအဖြူဘဝနဲ့
သူများက လည်လှီးလို့ သေကာနီးမှာကျတဲ့ သွေးတွေ ၊ ပေါင်းထားမယ် ။ ဤကမ္ဘာမှာရှိတဲ့
သမုဒ္ဒရာရေနဲ့ ထိုသေွး နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် ဘယ်ဟာများမယ်ထင်သလဲ . . .လို့ ဘုရားက အမိန့်ရှိတော့..
မှန်လှပါဘုရား ၊ နွားအဖြူ ဘဝနဲ့ ကျခဲ့သွေးက များပါလိမ့်မယ် ဘုရားလို့ ဖြေကြရပါတယ် ။
ကောင်းပြီ . . နွား အနီ တမျိုးတည်းပဲ ပြန်တွေးကြအုန်းတဲ့ . . . ။ ဘဝအဆက်ဆက်မှာ
နွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘဝမှာ နွားနီတစ်မျိုးတည်းမှာဘဲ ၊ သူများသတ်လို့ ကျတဲ့ သွေးတွေပေါင်းထားမယ်ဆိုရင်
၊ ပင်လယ်ရေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြ ၊နှစ်သက်သလို ဖြေကြပါတဲ့ . . . ဘယ်ဟာများမယ်ထင်လဲ . . . ၊ လို့ မေးတော်မူ တယ်. . .။
မှန်လှပါဘုရား . . သွေးကများပါလိမ့်မယ်လို့ ဖြေကြရှာတယ် ။
ဒါကို . . ဘုရားက ၊ တော်လောက်ပါပြီကွယ် ၊ '' သံသရာဖြတ်ဖို့ သင့်ပါပြီ ''
ပင်ပန်းလှပါပြီ လို့ မိန့်တော်မူပါတယ် ။ သေကာနီးမှာကျတဲ့ မျက်ရည်တွေလည်း မနည်းတော့ပါဘူး ၊
ဒါကြောင့် အားလုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမကြပါ ၊ အော် . . . တော်လောက်ပြီ ၊ ပင်ပန်းလှပါပြီလို့
ဤကဲ့သို့ ဆင်းရဲများကြတော့တဲ့ တဏှာအစပ်ပြတ်မှ အေးတော့မယ်လို့ ဆင်ခြင်ရမယ် ။
'' ဆင်းရြဲဖစ်တဲ့ အနီးကပ်ဆုံး အကြောင်းက ဇာတိပါပဲ ''
ဘယ်ဇာတိရရ အို ၊ နာ ၊ သေ ဆင်းရဲနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ရမှာ ၊
ဇာတိမရရန်ကလည်း ကမ္မဘဝကို သတ်မှဖြစ်မယ် ၊ ကမ္မဘဝ မလာအောင်ကလည်း
ဥပါဒါန်ကို သတ်မှ ဖြစ်မယ် ၊ ဥပါဒါန်ကို သတ်ချင်ရင်လည်း . . .
တဏှာကို သတ်မှ ဥပါဒါန်မလာမှာ ၊ အကြောင်းကိုပဲ သတ်ရမယ် ။
အကြောင်းရင်းကတော့ တဏှာသတ် တဏှာအစပ်ဖြတ်ဖို့ပါပဲ ၊ တဏှာကလည်း
ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆင်ခြင်တော့ ၊ ဘုရားရှင် မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်း . . . . . . . .
အာရုံ ဒွါရမေွးတဲ့ ခန္ဓာ ဟိုးဘဝကပြုခဲ့တဲ့ ကံ အရှိန်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဝိပါက
အကျိုးဖြစ်တဲ့ ခန္ဓာ ၊ နံပါတ် (၂) အကက်ွနော် မမေ့ပါနဲ့ ၊ အာရုံ ဒွါရတိုက်တော့ ငါးဒွါရမှာဖြင့် အဆင်း ၊
အသံ ၊ အနံ့ ၊ အရသာ ၊ အတေ့အွ ထိ တွေတဲ့ သိ ဆိုရင် စိတ် ၊ စေတသိတ် ၊ ရုပ် တွေ ပေါင်းစပ်လောင်ကျွမ်းလို့ ၊ ကာလမခြား ၊ မနောတံခါး ပွင့်အောင် လောင်ပါတယ် ။ မနောတံခါးမှာကျတော့ မျက်နှာ ကိုယ်အမူအယာ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အမူအယာတွေ ပေါ်လာတယ် ။ ဒါ '' သိ '' ဆိုရင် ခန္ဓာငါးပါး တစ်ပေါင်းတည်းဖြစ် ၊ တပေါင်းတည်းချုပ် ပါပဲ ၊ ပေါ်တဲ့အမူအယာကို '' ကာလမခြား နောက်စိတ်အစုက
လက်ခံဆုံးဖြတ်လေ့ရှိတယ် '' အဘိဓမ္မာ နည်းအားဖြင့် ဘုရားရှင် ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ် ။
စိတ်မှာ ယှဉ်ထားတ့ မောဟအမှောင်ဓါတ် ၊ လွှမ်းမိုးနေရင်တော့ အတုံး အခဲ
အထည်လို့ ထင်မှတ်ပြီး ငါ့ခေါင်း ၊ ငါ့ကိုယ် ၊ ငါ့လက် ၊ ငါ့ခြေ ၊ အတုံးအခဲ ထင်ပြီး မာနပါ ပါလာတယ် ၊
ဒီတော့မှ ငါ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ . . . .အတိတ် ၊ အနာဂတ် ၊ ပစ္စုပ္ပန် ကာလသုံးပါး ဆက်တော့တာပါပဲ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်လာပြီးတော့ကာ ၊ '' ငါ '' ပေါ် . .ရင် ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်လာတော့တာပါပဲ ငါ့သား . . .ငါ့သမီး ၊ ငါ့ဆွေမျိုး အဲ. ဒီအတွက် ဖြစ်ချင်တဲ့ ပုံစံချပြီး ၊ ဒီပုံစံ ဖြစ်ရမယ်လို့ စွဲလန်းတဲ့ ဥပါဒါန် ၊ စီမံကိန်းချရင်
ဥပါဒါန် ဖြစ်ပြီ ၊ ဥပါဒါန် ဆိုရင်ဖြင့် ၊ . . . နှလုံးအိမ် စိတ်မှီတဲ့ ဟဒယမှာ ဇောအရှိန် အဟုန် ထွက်ပါပြီ ၊
ဒီအရှိန် အဟုန်န့ပဲ၊ သဟဇာတနိဿယ အညမညအားဖြင့် တကိုယ်လုံး ဓါတ်ရိပ်ဓါတ်ခိုးတွေ
ပြောင်းတော့ တာပါပဲ ။
'' ဘဝပြောင်းတယ် ခေါ်ပါတယ် ''
အရှိန်ပြင်း ပူ၊ ပူသလောက် အရှိန်ပြင်း ၊ ပြင်းသလောက် ညံ့ဖျင်းပြီးတော့ကာ
အရောင်မှိန် အနံ့ဆိုး ဖွဲ့စည်းပုံကြမ်းလျှက် ၊ မသေခင်ကကိုက အပါယ်လေးဘုံသားဘဝ ဇာတိ
ယူနေပါပြီ လို့ ဆင်ခြင် ကြပါ ။
မေတ္တာနဲ့ ယှဉ်ဆက်လိုက်ပြန်တော့လည်း ၊ အအေးဓါတ်အရှိန်နဲ့ အထက်ကိုဆန်မယ်၊
အထက်ဆန်ပြီး သေရမဲ့ ဇာတိ ယူပြန်တာပါပဲ ၊ ဤအဖြစ်ကို သေသေချာချာ . . .စဉ်းစားဆင်ခြင်လျှက်
'' တဏှာအစပ်ပြတ်မှ အေးမှာပါလား လို့ နှလုံးသွင်းကြပါ ။
ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြိမ်ပေါင်းဟာလည်း မရေနိုင်တော့ပါဘူး ၊ ပင်ပန်းလှပါပြီ ၊
ဘုရားရှင် မိန့်တော်မူတဲ့ အလုပ်ပေးတရားအတိုင်း ဆင်ခြင်ရမယ် ၊ ရှုမှတ်ရမယ် ၊ အိမ်သည်စိတ်ယူပါ ၊
ရှုဆဲ ထုတ်ဆဲ ငြိမ်ဆဲ အမူအယာမှာ ဆံပင်ကို ဖယ်ထား ၊ လက်သည်း ခြေသည်းကိုဖယ် ပါ ၊
အရေပြားခြောက်တွေဖယ်ပါ ၊ လေဖြတ်တဲ့ အင်္ဂါကြီးငယ်ဖယ်လျှက် ၊ ကျန်တဲ့ နေရာအားလုံးမှာ . . .
ကာယပသာဒ အကြည်ဓါတ် ၊ အာရုံကြော အဖျားလေးတွေ အဆုံးသတ်ထားပါတယ် ။
မပြတ်လောင်တော့ တေဇောဓါတ် ၊ ဝါယောဓါတ်၊ ပထဝီဓါတ် ဓါတ်သုံးပါးကို သိခွင့်ရပါပြီ ၊
ခန္ဓာမီးလောင်တော့ ဓါတ်သုံးပါးသိတယ် ၊ ကာလမခြား မနောမှာ မျက်နှာ အမူအယာ ၊ ကိုယ်
အမူအယာ ၊ လက်ခြေ အမူအယာ ၊ ရှုဆဲ အမူအယာ ၊ ထုတ်ဆဲ အမူအယာ ၊ ငြိမ်ဆဲ အမူအယာ ၊
လှုပ်ရှားဆဲ အမူအယာ ဟာ တစ်စပ်တည်းဆိုသလို ကာလမခြား ပေါ်နေပါတယ် ၊ ဒါကို
နောက်စိတ်အစုမှ ဘုရားပေးတဲ့ ပညာနဲ့ ရှုမှတ်တဲ့အခါ . . .
နေတံမမ ၊ နေသောဟမသ္မိ ၊ နမေသောအတ္တာ
မျက်နှာကိုယ် အမူအယာ တွေကခင်ဗျားပိုင်တဲ့ နဖူးပါ ၊ ခင်ဗျားပိုင်တဲ့ မျက်ခုံး ၊ မျက်လုံး တွေပါလို့၊ ခင်ဗျားပိုင်တဲ့ မျက်နှာပါ ၊ နှာခေါင်းပါ၊ ပါးစပ်ပါ ၊ ခင်ဗျားပိုင်တဲ့ နားရွက်ပါ ၊ ခင်ဗျားပိုင်တဲ့ ခေါင်းပါလို့ စကားပြောတဲ့ အသံ မပါ ပါဘူး ။ရှုဆဲ ထုတ်ဆဲ ငြိမ်ဆဲမှာ အသစ် အသစ် တံလျှပ်ကဲ့သို့ ပေါ်တဲ့ အမူအယာသည် '' ငါ ''ဖြစ် နေပါတယ် ၊ ငါပါလို့ ဝန်ခံစကားပြောတဲ့ အသံ ပညတ် ပါမသွားပါဘူး ။ နမေသော အတ္တာ ၊အသက် လိပ်ပြာ အသက်ရှိတဲ့ အတုံးအခဲမဟုတ် ၊ မဟုတ်ရင် . . ဟုတ်တာက တံလျှပ်လိုတဲ့အသစ်၊ အသစ် လောင်ရင်း ကုန်နေတာပါ ။ တရှိန်ရှိန်နဲ့ မီးတောက်ပမာ လိုပါပဲ၊ အချိန်နဲ့
ယှဉ်ကြည့်တော့ကာတောက်လျှောက် ဝယဓမ္မာ သင်္ခါရာ စကားအတိုင်း ချုပ်ငြိမ်းနေပါတယ် ၊
အချိန်ကုန်ဘိသကဲ့သို့ရှုဆဲ ၊ ထုတ်ဆဲ ၊ ငြိမ်ဆဲမှာ တောက်လျှေက် ထိရင်းပျောက် လောင်ရင်းကုန်
ဖွားသေ သေနေပါတယ် ။ အနာဂတ်လည်းမရှိ ၊ အနာဂတ်မှာလည်း ခန္ဓာကြိုမပေါ် ၊ အတိတ်ခန္ဓာ လည်း
ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာ ၊ ပေါ်ဆဲမှာလည်းပဲ လောင်ရင်းကုန် ၊ ထိရင်းပျောက် ဘယ်တော့မှ
ပြန်မလာသော ပျောက်ခြင်းနဲ့ ပျောက်နေတာကြောင့် ချုပ်ငြိမ်းနေပါတယ် ။ တရိပ်ရိပ်နဲ့ ပေါ်သမျှ
တံလျှပ်ကဲ့သို့ ချုပ်ငြိမ်းခြင်း ပဲ ရှိပါတယ် ။
ဘုရားရှင်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ခန္ဓာအဆုံး ၊ သံသရာအဆုံး ၊ ဝဋ်ကထွက်မြောက်ခြင်း
သိမြင်တဲ့ ဥာဏ်ရပါတယ်လို့လည်း ဆင်ခြင်ပြီးတော့ ဘုရားကို ကြည်ညိုကြပါ ။ ဤအတိုင်းပဲ
မသိခဲ့ကြလို့ သံသရာ ရှည်ခဲ့တာလည်း များပေါ့ ၊ ပင်ပန်းလှပါပြီ ၊ အခုတော့ လွတ်ပြီလို့လည်း
ဆင်ခြင်ပြီးတော့ ပီတိဖြစ်ပါ အဖေါ်ကောင်းလည်း ရပြီလို့ ပီတိဖြစ်ကြပါ ။
'' စိတ်ရဲ့ ကျက်စားရာ အဖေါ်ကောင်း ''
တိတ်ဆိတ်နေပါတယ် ၊ စကားပြောတဲ့ အသံမပါပါ ၊ သက်ဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ အမူအယာ
မရှိပါ ၊ တရိပ်ရိပ်နဲ့ လောင်ရင်းကုန် ထိရင်းပျောက် ချုပ်ငြိမ်းခြင်းပဲ ရှိပါတယ် ။ ဆိတ်သုန်းတယ်
ခေါ်ပါတယ် ကာလသုံးပါးလည်း မငြိတွယ်တာကြောင့် ဝိမုတ္တိဓါတ်လို့လည်း ခေါ်ပါတယ် ။
တဏှာမရှိတာကြောင့် နိဝါန လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ် ။ ဗမာတွေက နိဗ္ဗာန်လို့လည်း
သုံးကြပါတယ် ။ ဒိဋ္ဌိ မရှိတာကြောင့် မာနမရှိတာကြောင့် တဏှာမရှိပါ ။ ကြိမ်ဖန်များစွာ အသစ် အသစ် နော် . . .။
ခန္ဓာ ပေါ်တိုင်း အရှုခံ ၊ အရှုဉာဏ်တည်ရင်ဖြင့် လွတ်မြောက်ပါပြီ ၊ နောက်ဆုံး အပြီးသေလို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့ ဖွားသေ အဖေါ်ကောင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ အဖေါ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ် . . . ။
'' ကာယ ဂထာ သတိ '' သည်သာ အကောင်းဆုံး အဖေါ်မွန် ။
ပဋာစာရီကို ဘုရားရှင် ဆုံးမတုန်းက ၊ ချစ်သမီး . . . ကိုယ့်ရဲ့ ဖခင် ၊ မိခင် ကိုလည်း
အားကိုးထင်ကြ ၊ အစ်ကို အစ်မ ဆွေမျိုးတွေကိုလည်း အားကိုးထင်ကြ ၊ ခင်ပွန်းသည် ၊ ဇနီးသည် ၊
သား ၊ သမီးတွေကိုလည်း အားကိုးထင်ကြ ၊ စီးပွားဥစ္စာကိုလည်း အားကိုးထင်ကြတယ်တဲ့ ။
ထိုအရာတွေဟာ အားကိုး အစစ်လည်း မဟုတ်ပါ ။ အဖေါ်ကောင်းလည်း မဟုတ်ပါ ။ ဒါကြောင့်မို့လို့
ပညာရှိများသည် '' တဏှာမရှိရာ နိဗ္ဗာန်လမ်းကို သုတ်သင် ရှင်းလင်းလို့ သွားကြပါတယ် ။ ''
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှင်းလင်းပြီးတော့ကာ လျှောက်ကြပါတယ်လို့ အမိန့်ရှိတော်မူပါတယ် ။
အာနန္ဒာ မထေရ် မြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့ နောက်မှာ ၊ အင်မတန်သောကရောက်ခဲ့ရပါတယ် ၊ အားကိုးမဲ့ကာ ၊ အဖေါ်မရှိတော့ ပင်ပန်းခဲ့ပါတယ် ။ နောက် . . . တဏှာအစပ်ပြတ်တော့မှ ဘုရား မရှိတဲ့နောက် . . .
'' ကာယဂတာ သတိသည်သာ အကောင်းဆုံး အဖော်မွန်ပါဘဲ '' လို့ ဥဒါန်း ကျူးခဲ့ရှာပါတယ် ။
မပြတ်မလပ် အရှုခံ ပေါ်တာကတော့ အိမ်သည် စိတ်ကိုယ်မှာ ပေါ်တာပါပဲ ။ မနောအထိ ကာလမခြားပေါ်တာကို အမူယာတိုင်း ၊ အမူယာတိုင်း ၊ အချိန်တိုင်းမှာ ဉာဏ်ထည့်ပြီးတော့ကာ
အရှုခံ အရှုဉာဏ် တည့်လျှက် . . . အရှိကို အရှိအတိုင်း ရှုမြင်တဲ့ ဉာဏ်ကို အဖေါ်လို့ဘဲ
ပွါးများခြင်းမှတပါး ကောင်းသော အဖေါ်မရှိပါ ။ အကောင်းဆုံး အဖေါ်ပါပဲ ။ အမြတ်လည်း
ကံဟောင်းလည်းကုန် ၊ ကံသစ်လည်း မလာ ၊ လွတ်မြောက်ရာဖြစ်ပါတယ် ။
တန်ဘိုးလည်း အင်မတန်ကြီးလှပါတယ် ။
ဘုရားရှင်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ပါပဲ ၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ကိုယ်တိုင်ပင့်ထားသလိုပါပဲ
ဘုရားဓါတ် ပင့်ထားတာပါပဲ ၊ တိုက်ရိုက် ဘုရားဖူးနေတာ ။
ဝဂ္ဂလိ ရဟန်းကို မိန့်တော်မူတာက အပုပ်ကောင်ကြီးကို မြင်လို့ ဘုရားမြင်တယ်
မယူနဲ့တဲ့ ၊ ဤ တရားမြင်မှ ဘုရားမြင်တယ် . . . ခေါ်ပါတယ် လို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် အားလုံးသည် ရှုဆဲ ၊ မှတ်ဆဲမှာ ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် ဖူးနေရပါတယ် ။
ဘုရား ဓါတ် ကိန်းနေပါပြီလို့ ဝမ်းသာကြပါ ။ ပင့်ထားပါတယ်တဲ့ ၊ ဘုရားကို ပင့်ထားပြီးသား
ဖြစ်နေပါတယ် ။ တိုက်ရိုက် ပူဇော်ပြီးသား ဖြစ်နေပါတယ် ။ အကောင်းဆုံး အမြတ်ဆုံး နေခြင်းပါပဲလို့
ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်ပြီး တိုး၍ တိုး၍ ကျင့်ကြပါ ။
ရှုမှတ်ဆဲမှာပင်လျှင် မဟာကုသိုလ် တွဲပါနေတာကြောင့် . . . စွမ်းအားတွေလည်း ပြည့်ပြည့်လာပါတယ် ။ အသွေးအသား ချဉ်ဆီမှာ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ သတ္တိတွေ တိုး၍ တိုး၍ လာနေပါတယ် ။
ဖွဲ့ စည်းပုံ နူးညံ့သည်ထက် နူးညံ့ ၊ အရောင်တောက်သည်ထက်တောက်လို့ တန်ခိုးကြီး
သည်ထက် ကြီးလာပါတယ် ။ ဘဝပြောင်းနေပါတယ် ။ နောက်ဆုံး ဖွဲ့စည်းပုံပျောက် လောင် အောင်
အထိ ပြောင်းလဲလျှက် ခန္ဓာဇာတ်သိမ်း အေးငြိမ်းပါလိမ့်မယ် ။ အကောင်းဆုံး အဖေါ်ပါပဲ ။
အော် . . . အတွေးနယ်မှာပေါ်တဲ့ ၊ မနောတံခါးမှာပေါ်တဲ့ . . . မျက်နှာ အမူအရာ
ကိုယ် အမူအယာကို အတုံး ၊ အခဲ ၊ အထည် ၊ ငါလို့ ထင်မိတာကြောင့် ငါ့အိုး ၊ ငါ့အိမ် ၊ ငါ့သား ၊
င့ါသမီး ၊ င့ါဆွေမျိုး ၊ တောင့်တကြောင့်ကြမျိုးစုံနဲ့ သံသရာမှာ ကပြောင်းကပြန် ခြားရဟတ်လို
ပင်ပန်းခဲ့တာ ကြာခဲ့ပေါ့ ၊ အခုတော့ လက်လွတ်ပြီလို့ ဆင်ခြင်ကြပါ ။ ပီတိဖြစ်ကြပါ ။
ဝစီ ပညတ် စကားလုံး ၊ လုံးဝမရှိပါ ။ လှုပ်ရှားတဲ့ အမူအယာ လုံးဝမရှိပါ ။ အသစ်
အသစ် တံလျှပ် ကဲ့သို့ တရိပ်ရိပ် နဲ့ ပေါ်ရင်း ပျောက် . . .လောင်ရင်းကုန် ။
ဤက့သဲို့ ကြိမ်ဖန်များစွာ ပွါးများကြကုန်လျှက် ၊ စိတ်မှီရာ အသွေး အသား
ချဉ်ဆီတွေမှာ ရုပ်တွေမှာ အညမည အားဖြင့် ဉာဏ်ရင့်သန်ကာ နောက်ဆုံး တဏှာအစပ်
အပြီးဖြတ်နိုင်သော ဉာဏ်အလင်း ထိအောင် ပေါက်မြောက်၍ အရဟတ္တဖိုလ်ဖြင့် ခန္ဓာဇာတ်သိမ်း
( သာဓု ၊ သာဓု ၊ သာဓု ) ဆရာတော် ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်စုံရပါစေ ဘုရား။
အထက်ပါ "သံဝေဂနှင့်အလုပ်ပေးတရားတော်" အား ဆရာတော်ကြီး၏ အတွင်းနေ တပည့်ရင်းဖြစ်သူ နန်းနွယ် ရေးသားသည့် စာအုပ်အား အမကြီး သစ္စာအလင်း www.thitsaralin.org/ ဆိုဒ်မှ ရရှိဖော်ပြ မျှဝေပေးပါသည်။ ။
ဤ ကောင်းမှုနှင့် စပ်သမျှ ကျန်းမာကြပါစေ၊ ချမ်းသာကြပါစေ၊ ၀မ်းသာကြပါစေ။ ။
'' စာရေးသူ၏ နန်းနွယ်၏ရည်ရွယ်ချက် ''
ဆရာတော်၏ သံဝေဂနှင့် အလုပ်ပေးတရားတော်သည် မဖြစ်မနေ ရင်ဆိုင်ရမည့် ၊ သေခြင်း တရားအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်စေခြင်းငှာ ရည်သန်၍ရေးသားဖေါ်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဖတ်ရှု လေ့လာကျင့်ကြံပွားများ အားထုတ်ကြပြီးလျှင် တဏှာအစပ် အပြီးဖြတ်နိုင်သော ဥာဏ်အလင်း ထိအောင် ပေါက်မြောက်နိုင်ကြပါစေရန်အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ၏ ဟောကြားအပ်သော တရားတော်များကို စုစည်းတင်ပြအပ်ပါသည်။ ဝိဇ္ဇာဥာဏ်မြတ်အလင်းဓါတ် လွှမ်းပတ်ကမ္ဘာတည်ပါစေ . . .
နန်းနွယ် (ဆရာတော်၏ အတွင်းနေတပည့်ရင်း) '' ၂ဝဝ၅-ခုနှစ်၊ ယောဂီဟောင်း ဟောစဉ် ''